Izinto zokwenza neqabane lakho: amava amahle kakhulu kunye | Amadoda aQinisekileyo
Xa ukulingane wakho kukho iimeko apho ungazi ukuba wenze ntoni ukuze wonwabe usazi into yothando. Ngokukodwa xa uqala ubudlelwane kukho iimeko, mhlawumbi, ezingasayi kuphinda zenziwe kuba zahlukile kwaye zinomlingo. Kukho amawaka izinto zokwenza neqabane lakho ukonwaba kunye kunye nokomeleza amaqhina wokuthembana.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zinto zibalaseleyo onokuzenza neqabane lakho.
1 Izinto zokwenza neqabane lakho ngendlela enyanzelekileyo
2 Yabelana ngezinto zokuzonwabisa kunye namaxesha
3 Izinto zokwenza neqabane lakho: ukwakha ukuthembana
Izinto zokwenza neqabane lakho ngendlela enyanzelekileyo
Xa sisithi ngokunyanzelwa sithetha ukuba ngumsebenzi oqhelekileyo njengobo bomi bakho. Omnye wabo upheka kunye. Amava okupheka kunye yenye yezona zinto zityebisayo kulwalamano. Iimeko zihlala zimiselwe apho unakho ukomeleza amaqhina ngakumbi ngokuba namandla ngakumbi, ukonwaba kwaye uzele luthakazelelo.
Njengoko besitshilo ekuqaleni kwenqaku, kukho iimeko ezingazukuhluka xa sele uneqabane lakho ixesha elide. Enye yezinto zokwenza neqabane lakho, ngakumbi kwasekuqaleni kubudlelwane, kukuthetha ubusuku bonke. Xa uqala ukwazi umntu, kulungile ukuba uchithe ubusuku bonke uncokola, nisazana kwaye nixelelana ngamava awodwa kunye nawonwabisayo abanawo ebomini. Le yenye yezinto eziqhele ukwenziwa njengesiqabane kwaye ezingalibaliyo.
Ewe, ukuhamba kunye yenye yezinto onokuzenza neqabane lakho okonwatyelwa kakhulu kwaye ukhunjulwe. Akuyomfuneko kwaye ube kude kakhulu. Kuya kufuneka ubeke bucala impelaveki ukuze uyazi idolophu ekufutshane kodwa eyindida. Ukuhlala kunye nomnqweno wokufunda ngamasiko avela kwezinye iindawo kuhlala kukhuthaza ukwakhiwa kweenkumbulo ezixabisekileyo kubudlelwane.
Nangona kunokubonakala ngathi kusisiyatha, ukuba emva komsebenzi okanye ukuba noxanduva oluninzi ekupheleni kosuku ufuna ukuzola kwaye wonwabele ipitsa elungileyo kunye nokuthuthuzela kwebhedi, ulibale ngengxaki eyenziwayo yokutya egumbini kwaye wonwabele oko kutya. Le yinto ehlekisayo, ehlekisayo yothando eya kuba yenye yezinto othanda kakhulu ukuyenza neqabane lakho.
Yabelana ngezinto zokuzonwabisa kunye namaxesha
Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba kwisibini ngasinye kufuneka kubekho ukuthanda izinto ezifanayo. Abanye bathi ukuba isibini sahluke kakhulu kwesinye, sinokusebenza kuba ziziipali ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, xa kukho uthotho lwezinto ezininzi ezifanayo, kunokuba lula kakhulu ukwenza amava kunye nokwabelana ngamaxesha. Enye yeendlela zokwabelana ngeencasa kwaye kamva unamava afanayo kukufunda incwadi enye. Ukufunda incwadi enye ayizukunyusa amanqanaba enkcubeko kuphela, kodwa kuya kukuvumela ukuba nazane kwelinye inqanaba. Xa bobabini beyigqibile incwadi kuyacetyiswa ukuba niphume emva kwemini niyokuxoxa kwaye nifumane izimvo zomnye. Kwesinye sezona zicwangciso zibalaseleyo zokwenza njengesibini.
Itekhnoloji izise intuthuzelo enkulu kwizibini ezitshatileyo. Ngawo onke amancedo exesha ledijithali ukuba ubukele umabonwakude, ekuphela kwento ekufuneka uyenzile koku yitsho uthotho enifuna ukulubona nobabini kwaye nilabe iyure yonke imihla ukuze nilulandele. Xa kufikwa kumba wokwenza umdyarho woluhlu lweenketho ozithandayo, ayifanelekanga izahluko ezahlukileyo. Yenye yezinto ekufuneka yenziwe kunye.
Inkcubeko ikwangundoqo kubudlelwane. Ikwabelana ngamava nomntu omthandayo. Ukuze umanyano lomelezwe ngakumbi nangakumbi, kusasa kwe NgoMgqibelo ukuya kwiziko lembali okanye ukuya kukhenketho lwemyuziyam. Esinye sezicwangciso ezinokwenziwa njengesibini kwaye esidibanisa kakuhle kakhulu kutyelelo lwemyuziyam kukuphelisa usuku ngekofu elungileyo.
Izinto zokwenza neqabane lakho: ukwakha ukuthembana
Ithemba elisesona sixhobo silungileyo sokuqinisa ubudlelwane. Ke ngoko, ukuxelela iqabane lakho malunga neziphumo zalo ezisenyongweni kunokusetyenziselwa ukwakha into entle kakhulu. Kubudlelwane, ukuthembana kubaluleke kakhulu. Ukuba kukho into iqabane lakho elingayaziyo kwaye ucinga ukuba kufuneka uyazi, kungcono ukuba ubaxelele. Oku kuya kunceda ukudiliza izithintelo kunye nokwazana ngendlela enzulu ngakumbi.
Ukuzilolonga kunye kunokuba luluvo oluhle nokuba uninzi alucingi. Kuqhelekile ukubona ezinye izibini zisiya kwindawo yokuzivocavoca kunye kwaye abantu bathi kungcono bahambe bodwa ukuze bangazenzi zonke izinto kunye. Nangona kunjalo, inokuba phakathi kwabo bobabini banokuba nayo uqeqesho ngokwahlukeneyo abanako ukuba nalo. Kuya kufuneka uthathe ithuba lokukhuthaza omnye nomnye ukuba uqeqeshe nzima kwaye uncedane ekunyuseni oomatshini kunye nemivalo.
Phakathi kwezinto zokwenza neqabane lakho esele silikhankanyile, sibhekise ekuthatheni uhambo oluncinci. Kuyafana nangokuthatha uhambo olude. Baya kuhamba uhambo oluya kwindawo ekude kwaye bafa ukudibana. Akukho mda, kufuneka wenze uhlahlo-lwabiwo mali, ukhethe ihotele kwaye wonwabele isibini kunye nohambo. Ngokwesiqhelo olu hlobo lohambo olo Bazibophelela ngakumbi kuba baya kuhlala ixesha elithile endaweni engeyiyo indawo yokuthuthuzela. Ngale ndlela, kwindawo ekude kakhulu, ninomnye kuphela. Oku kunceda kakhulu ukomeleza amaqhina okuthembana.
Izidlo zokutyela ezintle zisoloko lukhetho olufanelekileyo phakathi kwezinto onokuzenza neqabane lakho. Awunakukhathazeka ngeendleko eziza kwenziwa, kodwa jolisa ekungcamleni izitya ezimnandi, iziselo ezishushu kunye nokuncoma imeko engafaniyo neyakho. Esi sicwangciso sinokudityaniswa nezinye ubusuku obunye kunye neziselo kunye neentetho zasebusuku kude kuse. Ekuseni yindawo efanelekileyo yokonwabela esi sibini. Yenye yezinto ezenziwa zizibini eziza kwenza ukuba umjoyine ngakumbi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nezinto zokwenza neqabane lakho kunye nezibonelelo onokuthi ube nazo kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Izinto zokwenza neqabane lakho
Isuti emhlophe yomyeni